Kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo isku heysta saxiixa xidig ka tirsan Inter Milan – Gool FM
Kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo isku heysta saxiixa xidig ka tirsan Inter Milan
(England) 22 Nof 2018. Chelsea ayaa isku diyaarineysa in loolan adag ay la gasho kooxda Manchester United, si ay isaga xoojiso qeybta dambe ee difaaca, kadib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo.
Wargeyska caanka ah ee dalka England “The Sun” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxaha Chelsea iyo Manchester United ay ku wada dagaalamayaan saxiixa difaaca reer Slovakia ee Milan Škriniar.
Macalinka kooxda Blues ee Maurizio Sarri ayaa kor ka eeganaya adeega laacibkan, wuxuuna doonayaa inuu gacanta ku dhigo, maadaama uu dareemayo in ay jirto dhibaato dhanka difaaca ah ee heysata xili ciyaareedkan.
Maurizio Sarri ayaa ku tiirsan difaaca reer Brazil ee David Luiz, kaasoo 32 jir noqon doona inta lagu jio xili ciyaareedkan, iyo sidoo kale difaaca xulka qaranka Germany ee Antonio Rudiger.
Waxaa lagu soo waramayaa in qiimaha Milan Škriniar uu gaari karo 70 milyan ginni, waxaana suuragal ah in uu qasbanaado Maurizio Sarri bixinta lacagtan, si uu u helo saxiixa difaacan reer Slovakia, isla markaana uu u joojiyo xukunka Manchester City ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedyada soo aadan.
Dhinaca kale waxaa jira warar xan ah ee ku aadan in 23 jirkan uu ka careysan yahay maamulka kooxda Inter Milan, maadaama ay ka caga jiidayaan in ay mushaar ahaan u siiyaan qiimaha uu doonayo difaaca reer Slovakia.
Ronaldo oo markii ugu horreysay Calaamad GADUUDAN wajiga marsan doona kulanka soo socda ee Serie A...(Sabab Cajiib ah oo ka dambeysa)